Izindaba - Izici nokusetshenziswa kwe-tapered roller bearing
Izici nokusetshenziswa kwe-tapered roller bearing
Ungakhetha kanjani ukuthwala okulungile
Izici ze-tapered roller bearings
I-tapered roller bearing ingohlobo oluhlukile lokuthwala. Amasongo angaphakathi nangaphandle we-bearing anemigwaqo emincane, futhi ama-roller angama-cone shape. I-roller no-raceway basekuxhumaneni nomugqa, okungathwala umthwalo osindayo osabalalayo kanye ne-axial, futhi futhi kungathwala umthwalo we-axial omsulwa. Okukhudlwana i-engeli yokuxhumana, kuyanda umthamo wokuthwala we-axial.
Idizayini ye-roller tapered kufanele yenze umugqa wokuxhumana phakathi kwe-roller no-raceways wangaphakathi nangaphandle unwebeke futhi uwele iphuzu elifanayo ku-axis ethwele ukubona ukugoqa okumsulwa.
I-roller tapered roller esanda kuklanywa yamukela isakhiwo esiqinisiwe. Ububanzi be-roller buyanda, ubude be-roller buyekiswa, futhi inani lama-roller liyanda. Amandla wokuthwala nokuphila kokukhathala kokuzalayo kuthuthukiswa kakhulu ngokusebenzisa i-roller convex. Ukuxhumana okuyindilinga nokuyindilinga kusetshenziswa phakathi kobuso obukhulu bokugcina nobambo olukhulu lwe-roller, okuthuthukisa ukuthambisa.
Lolu hlobo lokuthwala lungahlukaniswa lube umugqa owodwa, umugqa ophindwe kabili kanye nomugqa amane we-tapered roller bearing. Lolu hlobo lokuthwala lusebenzisa nemikhiqizo yochungechunge lwaseBrithani.
Cage uhlobo tapered roller eziveza
Amabheringi amaningi we-tapered roller enziwe ngamakheji ensimbi acindezelwe. Kodwa-ke, lapho ububanzi obungaphandle bokuthwala bukhulu kune-650mm, amakheji anezimbobo zekholomu ayasetshenziswa.
Irowu elilodwa: isondo langaphambili, isondo elingemuva, umshini wethini lokuphotha, i-asi ye-asi, umshini wokugaya, imishini yokwakha, imishini yokuphakamisa, imishini yokuphrinta namadivayisi ahlukahlukene wokunciphisa.
Irowu Double: umshini ithuluzi lokuphotha, esitimela kanye rolling stock
Imigqa emine: ukusekelwa roll